Ny firaisan-tsaina tsy miaraka amin’i Jesoa Kristy dia tsy mahomby – FJKM Ambavahadimitafo Ny firaisan-tsaina tsy miaraka amin’i Jesoa Kristy dia tsy mahomby |
Ny firaisan-tsaina tsy miaraka amin’i Jesoa Kristy dia tsy mahomby
Publié le 13 novembre 2012 à 12:11
Jaona 21 : 1-14 : 1Rehefa afaka izany, dia niseho tamin’ny mpianatra indray Jesosy teo amoron’ny Ranomasin’i Tiberiasy; ary toy izao no nisehoany: 2Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didymo, sy Natanaela, ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak’i Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa koa. 3Hoy Simona Petera taminy: Handeha hanarato
aho. Hoy ireo taminy: Handeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambokely, ary tamin’iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. 4Ary nony efa nazava ratsy ny andro, dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. 5Dia hoy Jesosy taminy: Anaka, manan-kanina# va ianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. 6Ary hoy Izy taminy: Alatsaho eo amin’ny sisiny ankavanan’ny sambokely ny haratonareo, dia hahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. 7Ary hoy ny mpianatra izay tian’i Jesosy tamin’i Petera: Ny Tompo iry . Ary raha ren’i Simona Petera fa ny Tompo iny, dia nisikinany ny akanjo ivelany (fa tsy niakanjo izy), ka nirotsaka teo
amin’ny ranomasina izy. 8Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambokely ihany nisarika ny harato feno hazandrano; fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho roan-jato hakiho ihany. 9Raha vao nikatra teo an-tanety izy, dia nahita afon’arina teo sy hazandrano teo amboniny ary mofo. 10Hoy Jesosy taminy: Analao hazandrano amin’ireo vao azonareo teo. 11Dia niakatra Simona Petera, ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazandrano vaventy, telo amby dimam-polo amby zato; ary na dia be tahaka izany aza izy, dia tsy triatra ny harato. 12Hoy Jesosy taminy: Avia hisakafo. Fa tsy nisy mpianatra sahy nanontany Azy hoe: Iza moa Hianao? satria fantany ihany fa ny Tompo Izy. 13Ary tonga Jesosy, dia nandray ny mofo, ka natolony azy, dia vao ny hazandrano indray. 14Izany no fanintelon’ny nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpianatra, rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy.